“Waxaan sameeyay wax walba ee ii suurtogaliyay inaan la tartamo xiddigaha Ronaldo iyo Messi” – Van Dijk – Gool FM
(Yurub) 03 Sebt 2019. Daafaca kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo xulka qaranka Holland ee Virgil van Dijk ayaa sheegay in marna aan la ila bar-bardhigi Karin xiddigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
Laakiin dhinaca kale Virgil van Dijk oo dhawaan loo caleemo saaray xiddigii ugu fiicnaa sanadka Yurub ayaa xaqiijiyay inuu xilli ciyaareed fiican la qaatay kooxdiisa Liverpool iyo xulkiisa qaranka ee Holland.
Daafaca reer Holland ayaa abaal-marinta xiddiga sanadka Yurub ku garaacay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo goob-joog ahaa kuwaasoo abaal-marinta kula tartamayey Virgil Van Dijk, kaasoo xili ciyaareed fiican la qaatay kooxdiisa Reds, kaddib markii uu ka caawiyay ku guuleysiga Champions League.
Virgil van Dijk ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday wuxuu ku sheegay:
“Suurtogal maahan in aniga la ila bar-bardhigo xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, laakiin waxaan sameeyay xilli ciyaareed wanaagsan”.
“Waan ku faraxsanahay inaan arko UEFA oo u dooratay daafac abaal-marinta xiddiga ugu fiican sanadka ee Yurub”.
“Aniga ahaan iyo dhamaan daafacyada kale waxay abaal-marintan u tahay sharaf aad u weyn”.
Lorenzo Insigne oo laga saaray shaxda xulka qaranka Talyaaniga… (Maxay tahay sababtu, yaase lagu bedelay?)
Sir Alex Ferguson oo fariin qaas ah u diray Cristiano Ronaldo